Faaiidada caafimaad ee kaarootada - 11 faaiido cajiiba - Caafimaad tips
Home / Cuntada / Faaiidada caafimaad ee kaarootada - 11 faaiido cajiiba
Faaiidada caafimaad ee kaarootada - 11 faaiido cajiiba
Admin October 31, 2018 Cuntada
Kaarootada waa mid ka mida khudaarta cajiibka ah ee dunida aadka looga isticmaaloo dalkeenana wuu ka baxaa oo waa laga helaa waana nimcooyinka Allah uu inagu galadaystay sidoo kale geedkan wuxuu ka mid yahay cuntooyinka nafaqada leh balse kama mid aha cuntooyinka lagu naaxo.
kaarooga waxaa loo isticmaali karaa qaab cunto ahaan iyo qaab cabitaan ahaaneed dhinaca kale geedkan kaarooga loo yaqaano wuxuu kaloo ka mid yahay cuntooyinka dhiiga kordhiya waxaadna ka helaysaa meel kasta oo aad ku sugan tahay dalkeena wuxuu ka mid yahay meela uu sida balaadhan uga baxo laakiin bulshada soomaaliyeed maanta waxaad moodaa inay soo fahmaayaan faaiidooyinka iyo waxtarka nafaqeed ee karootada, sidaas darteed maanta waxaynu soo bandhigaynaa faa'iidada karootada.
Halkan waxaan ku taxaynaa waxtarka karootada iyo dhawr cudur oo kaarooga ka hortag ahaan loogu qaato ama cuniska iyo cabitaanka karootada wax weyn ka taraan waxaana kamida .
Araga iyo caafimaadka indhaha
Faaliga iyo qalalka
Macaanka iyo sonkoroowga
Fiiro gar ah : faaidooyinka karootada iyo waxtarkiisa wuxuu fiican yahay marka aan la karin ee sidiisi loo cuno sidoo kale waxaad ka dhigan kartaa sharaab adigoo ku samaysan kara gurigaaga ama meel kasta .
Shabakada Caafimaad Tips markasta kala soco barnaamijyo ka hadlaaya isku daaweynta dhirta dabiiciga ah , Dhammaanteen waxaan rajeenaynaa inaan si dabiici ah u noolaano si aan u helno dadkeena oo caafimaad ku waara iyo waliba dalkeena oo noqda meel caafimaad.
Allow caafimaad sii inta xanuunsan